DHIRTA APPLE "KANDIL ORLOVSKY": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA IYO SAWIRADA, SIFOOYINKA IYO ASTAAMAHA BEERASHADA - BEERTA
Vitamin-champion - nooc ka mid ah tufaaxa "Kandil Oryol"
Apple waa dalagga miraha ugu da'da weyn. Way adagtahay in la helo beer beer ah oo ugu yaraan dhowr ka mid ah geedahan aan kori doonin.
Si joogto ah u soo baxaya noocyo cusub iyo Beelaha of tufaax. Mid ka mid ah noocyada beeraha ee ugu dambeeyay ayaa loo saari karaa geedka tufaaxa ee Kandil Orlovsky.
"Kandil Orlovsky" waa noocyo kala duwan oo jiilaal ah oo geedo tufaax ah. Gobolada beerashada: Dhulka dhexe iyo dhexe ee madow.
Tufaaxa kala duwan ee noocaan ah waxaa lagu kaydiyaa waqti aad u dheer, ilaa dhammaadka February. Sababtoo ah maadada sare ee pectin, waxay sameeyaan macaan iyo macaan. Kala duwanaantani waa ku guuleysatay fitamiinada. Si aad u ilaaliso dalagga cusub, oo aan ka lumin guryaha, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo habka kaydka ah.
Noocyada qaboobaha waxaa sidoo kale ka mid ah Molodezhnaya, Moscow Late, Orlovskoe Polesye, Winter Beauty iyo Nastya.
Tufaaxa loogu talagalay in lagu keydiyo dhammaadka Sebtembar. Dooro hal dhinac, siman iyo midhaan oo si tartiib ah loogu dhejiyo kartoon ama sanduuq alwaax ah. Lakab kasta waxaa lagu shubay balka qoyan, caws ama sanduuq lagu qallajiyey. Ku kaydi si fiican Maqsin, oo leh t - 2 ilaa +3. Qoyaanka hawadu wuxuu ka socdaa 80 ilaa 95%.
"Kandil Orlovsky" waa qayb ahaan is-iskuday. Noocyada ugu fiican ee pollinators isaga for: waa Antonovka caadiga, Aphrodite, Orlik, Freshness iyo Venyaminovskoe. Si aad u hesho goosashada fiican, waxaa fiican in la dhigo noocyada kuwaas oo dhow.
Qeexida kala duwan Kandil Orlovsky
Qeexida muuqaalka muuqaalka geedka tufaaxa "Kandil Orlovsky":
Geedku waa hooseeyaa, cabbirka dhexdhexaad ah. Crohn dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah, oo leh curves, laamood, oo ku dhowaad xagasha qummanaanta ee jirridda. Jilifku waa siman yahay, madow madow.
Caleemaha ayaa wareegsan, dheer, brownish ah. Buds yar yar, barafka. Caleemaha waa cagaar mugdi ah, cirro leh, qulqulaya, oo leh geeso jilicsan. Inflorescence of 4-5 ubax, dhalaalaya, casaan.
Miraha waa caleen, hal dhinac, halkii weyn. Massa ku saabsan 110-160 garaam. Taabashooyinka, tufaaxa dheeriga ah oo leh dhalaal dhalaalaya oo dhalaalaya oo dhalaalaya, oo jilicsan. Jidhku waa jaalaha, oo leh cagaaran cagaaran, jilicsan dhadhan-macaan, casiir leh, oo leh caraf udgoon oo jilicsan.
Waxaa ku jira xaddi badan oo fitamiin C
Maaddooyinka sare ee nafaqooyinka waxay sidoo kale ku faani karaan: Gruszka hore, Chosen, Rennet Chernenko, Quinti iyo Krasa ee Sverdlovsk.
Sawir yar oo ah sawirrada geedka tufaaxa "Kandil Orlovsky":
Kala duwanaanshahaan waxaa laga helay 1997-kii iyada oo la isticmaalayo wasaqeynta bilaash ah Ka shaqeeya noocyada taranta waxaa fuliyay E. N. Sedov, V. V. Zhdanov, E. A. Dolmatov iyo Z. M. Serova. In habka of taranta loo isticmaalo geedo of noocyo hybrid Wesley iyo Jonathan. Sanadkii 2002, "Kandil Orlovsky" waxaa lagu soo bandhigay Diiwaanka Gobolka.
Erayo yar oo ku saabsan gobollada ku habboon ee kordhaya noocyada kala duwan.
Goobta "Kandil Orlovsky" ee ku yaalla bartamaha, waqooyiga Caucasus iyo Chernozem.
Sababtoo ah adkaysigeeda jiilaalka iyo iska caabinta cudurada fungal inta badan, waa la kari karaa meel kasta.
Darajada waxay haysaa wax soo saarka sare iyadoo aan loo eegin meesha koritaanka.
Wax-soosaarka sare waxaa sidoo kale lagu muujiyey noocyada Orlovskaya Beloritsa, Gabdhaha Melba, Antey, Dayrta Low-growing iyo Winter Belar.
Marka hore 3-5 sano ka dib markii la beero, geedku wuxuu bilaabmaa inuu midho u dhasho. Marka da'da yar, dhalidda waxay noqon kartaa ilaa 160 kg. laga bilaabo hal geed. Sanadka Fruiting. Waqti ka dib, dhalidu way yar tahay. Bisaylka laqari karo ee tufaaxu wuxuu bilaabmaa qaybta labaad ee Sebtembar wuxuuna kudhaca macaamilka.
Miraha waxay leeyihiin tayada ilaalinta wanaagsan iyo gaadiidka. Si aad u hesho goosashada wanaagsan waxay u baahan tahay inaad si haboon u daryeelto geedka tufaaxa.
Tayada haynta iyo gaadiidka wanaagsan waxaa sidoo kale lagu muujiyaa noocyada soo socda: Malt Bagaevsky, Dhallinyarada Dabiiciga ah, Welsey, Chudny iyo Orlovskoye Polesye.
Geedka tufaaxu wuxuu si fiican u ilaaliyaa dhaxan -35 C. Laakiin, si uu u koro geed caafimaad leh oo xoog leh, waa in si fiican loo beeray.
Geedo yihiin beeray, badanaa guga, ee kuxirnaa iyo boogaha la diyaariyey. Dooro dallacaadda qorraxda, dabacsan oo si fiican u hawlan, koonfurta ama koonfur galbeed.
Haddii aysan suurtogal ahayn in lagu beero marin, markaa werwer kasta oo yar ayaa sameyn doona. Digaag iyo caarad dhexdhexaad ah oo dhoobo ah iyo dhoobo waxay noqon doontaa ciid wanaagsan.
Kandil Orlovsky ma jecla shading, wuxuu u baahan yahay farqiga ugu badan. Waa adkaysi u ah qolof iyo jiilaal aad u adag-adag.
Qodobbada beeritaanka waxay sameeyaan 70-80 cm ballaaran iyo in yar oo ka badan mitir qoto dheer. U hubso inaad wadato baalal beerto. Bacriminta macdanta iyo peat isku qasan ee humus lagu daro godadka diyaarsan. Ka dib 1-2 toddobaad, marka dhulku dego, waxaad ku beeri kartaa seedling ah.
Dhalo-xiiran ayaa lagu xiraa jilbaha iyadoo la xaddiday "sideed". Meelaha u dhexeeya iyaga ayaa loo dhigaa maro jilicsan ama jilbaha. Roots ayaa si adag u daboolay dhulka iyo si fiican u waraabiyey. 3-4 toddobaad ka dib waxaad ku siin kartaa kiciyaha kicinta.
Sannad kowaad markaad beerto, geedka tufaaxa wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah. U hubso inaad isticmaasho dhar yar iyo dhar midab leh.
Ugu horeysay, nitrogen - guga, iyo xagaaga - buufin Bacriminta dareeraha.
Sannadka soo socda, dharka guga waa la hayaa waxaana laysku daraa dhirta xididka dayrta ee xilliga dayrta waxaa lagu daraa Bacriminta potash-fosfate.
"Kandil Orlovsky" waa noocyo kala duwan oo soo kordhay, sidaa daraadeed waa inaadan beeran dhir dheer oo u dhow, wayna faragalin kartaa koritaanka geed.
Marka geedka tufaaxu uu bilaabo inuu midho u dhasho, bacariminta waxaa la qaadaa ilaa 4 jeer sanadkii. Wixii dhejis xidid waxaa wanaagsan in la isticmaalo Bacriminta organic, iyo Bacriminta foliar - macdanta. Ka hor inta aan la quudin iyo ka dib - geedka waa in si fiican loo waraabiyaa.
Fasalka dhexdiisa, laamuhu si xoog leh ayey u leexiyaan miisaanka miro waxayna jebin karaan. Si looga hortago tan, waa lagama maarmaan in la dhigo qoryaha hoosta. Ka dib goosashada ka dib, waa la goostay.
"Kandil Orlovsky" sababtoo ah qaabkeedu uma baahna manjooyin qaabeyn ah oo taajka ah. Gooyo waxaa lagu sameeyaa oo kaliya dib u soo kabashada, geedaha dadka waaweyn: ka saar tuubooyinka qalalan iyo waxyeello. Sidee iyo sidee ayay u dhaawacmi karaan?
"Kandil Orlovsky" ayaa gabi ahaanba adkaysi u ah qolof iyo ma u nugul yihiin cudurada fangas. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo weerarka cayayaanka: geedka tufaaxa ah, sawfly iyo aphids.
Ha ilaawin sidoo kale ka hortagga muuqaalka cayayaanka sida midhaha miraha, hawo-geedka, aboorka iyo aboorka macdanta, silkworms.
Hababka halganka ayaa gubanaya caleemo qallalan iyo saqafyo iyo ku buufinta cayayaanka.
Apple kala duwan "Kandil Orlovsky" oo aan qabyo ahayn oo uma baahna daryeel gaar ah. Wax-soosaarka ugu sarreeya ayaa laga heli karaa dadaal yar.
Sababtoo ah tayadiisa, noocyo kala duwan ayaa si dhakhso ah u helaya caan ka mid ah bannaanka u.